Global Voices teny Malagasy » Isiraely: Gilad Shalit atakalo gadra nahalatsa-dra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Janoary 2008 7:09 GMT 1	 · Mpanoratra Gilad Lotan Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Israely, Ady & Fifandirana, Lalàna, Politika
Gilad Shalit  dia ilay miaramila isiraeliana iray voasambotry ny mpitolona Palestiniana teo ampiampitana sisintany tamin’ny 25 jona 2005, ary notazonin’ny Hamas nanomboka hatreo. Efa maromaro ihany ny fanelanelanana diplomatika  hifanakalozana babo eo amin’ny Hamas sy Israel fa gadra palestiniana anjatony no takiana hanakalozana an’i Gilad. Dia namepetra ny isiraeliana fa tsy hisy gadra voaheloka noho ny fandatsahan-dra azo afahana, ary tsy niova tamin’io fepetra io ny isiraeliana. Efa nisy ihany soso-kevitra tao amin’ny filankevitry ny minisitra hanova ny famaritana hitazonana izay namono Isiraeliana mivantana fa tsy ireo mpampihorohoro atidohan’ny fanafihana kosa. Ny antony hanovana ny famaritana moa dia mba entina hanehoan’isiraely fileferana mba hanafahana ny lehiben’ny mpampihorohoro hanakalozana ny miaramila azo babo. Hihaona ny komity amin’ity herinandro ity, niady hevitra ary dia tsy nisy ny fanapahan-kevitra farany . Ny anton’ny adihevitra ankehitriny hanovana ny fepetra  dia ny fanehoam-bahaolana nataon’ny Hamas amin’ity raharaha Shalit ity – hanakalozana gadra 450 fa tsy 1000 notakiana teo aloha intsony.
Manoratra amin’ny bolongany ny mpanao gazety Daniel Bloch :
Hitan’ny mpitondrantsika tsara fa tsy maintsy tadiavina ny fomba azo atao rehetra amin’ny diplaomasia, na dia heverina fa tsy tokony ifampiraharahana aza ny ankilany. Ny fanontaniana tokana mampanahy dia hoe hanatanteraka ny fampanantenana nataony ve ny ankilany?Abba Eban  moa dia malaza amin’ilay fombam-pitenenana manao hoe “ tsy mba nanadino ny fomba iray hanararaotana ny Arabo fandrao very avokoa izay azo araraotina rehetra (the Arabs did not miss out any opportunity to miss out on all the opportunities)“. Raha marina io fombam-pitenenana io, dia milaza zavatra amintsika. Hatramin’ny 1967 no tsy nahay nanararaotra isika. Mbola ho diso izany indray ve isika ankehitriny?
Mamadibadika ny karazam-pifanarahana mety ho azon’ny Hamas sy Isiraely atao kosa i Pinhas Inbari, ao amin’ny bolongan’ny Jerusalem Center for Public Affairs :
Manaiky ny hanafaka gadra maromaro i Israel ka ao anatin’izany i Barghouti , ary manomboka mamariparitra ny fepetra anafahana ireo gadra voaheloka noho ny fandatsahan-dra (mba hampisondrotra an’i) Abu Mazen .
Raha maneho ny firarian-tsoany  hanafahana an’i Gilad Shalit  sy manantena ny hiverenany ny Mpanabolongana Israeli isankarazany , Eldad miaramila ao amin’ny IDF, kosa manoratra ny tsy fitokisany ny governemanta sy ny fomba hifampiraharahany amin’ity fakana ankeriny ity ao amin’ny bolongany :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/01/08/410/
 maromaro ihany ny fanelanelanana diplomatika: http://en.wikipedia.org/wiki/Gilad_Shalit#Diplomatic_efforts
 niady hevitra ary dia tsy nisy ny fanapahan-kevitra farany: http://news.msn.co.il/news/StatePoliticalMilitary/Military/200712/2007123023400.htm
 adihevitra ankehitriny hanovana ny fepetra: http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/940135.html
 bolongan’ny Jerusalem Center for Public Affairs: http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=440&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=11247
 maneho ny firarian-tsoany: http://cafe.themarker.com/view.php?t=207595
 hanafahana an’i Gilad Shalit: http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1160782
 Mpanabolongana Israeli isankarazany: http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1124431